Xoghayaha Wakiiladu Dagaal buu Shalay La galay Cabdirisaaq Khaliif | Baraarug News
Home Wararka Xoghayaha Wakiiladu Dagaal buu Shalay La galay Cabdirisaaq Khaliif
Xoghayaha Wakiiladu Dagaal buu Shalay La galay Cabdirisaaq Khaliif
Xoghayaha Guud ee Golaha wakillada Soomaliland waxa maalintii shalay, uu dagaal adag la galay Gudoomiyaha Cusub ee Gollaha wakiilada C/risaaq Khaliif Axmed waxana la arkayay isaga oo kula ka caaya talaabooyin ka baxsan shaqadii meesha ka socotay. Wax yaabihii uu sameeyay intii ay shaqadu socotay waxa ka mid ahaa.
1: in markii uu musharax Fartoon uu fuulay kursiga shirgudoonka uu in uu Cabdirsaaq Khaliif Axmed ka bakhtiyay makar_foonka.
2:markasta oo Golluhu uu buuq sameeyo waxa uu Gudoomiyaha Gollah Guurtida kulaha Cabdirisaaq Khaliif iyo Xertiisa ayaa qaylinaya.
3: xoghayaha Guud ee Gulluhu wuxuu akhriyi kari wayay Siifiigii Gudoomiyaha cusub ee Gollaha Wakiilada C/risaaq Khaliif taasi oo ceeb wayn ku ah Xogaha.
Wuxuna Xoghayuhu Golaha wakiiladu ku talo galay in uu wax isdabamarin sameeyo isagoo si gaara ah u watay musharixiinta Xisbiga Kulmiye watay.
Xasuusin: Dorashadii Gudoomiyaha Golaha wakilada loogu doortay Baashe Maxamed farax waxa xoghayaha Guud ee Gollaha wakiilada lagu eedayaa in uu wax is dabarin sameeyay, isla markaana uu fara geliyay doorashadaasi.
Xoghayaha Guud ee Gollaha wakiilada C/risaaq Siciid Ayaanle waxa uu shaqaalaha Gollaha iyo wabaahintaba waxa uu ula dhaqmaa si ka baxsan anshaxa, shaqaalaha Gollaha ka shaqeeya waxa uu Cabdirsaaq Siciid Ayaanle uu kula kacaa tacadiyo kala duwan waxaana Gudoomiyaha Cusub loo baahanyahay in uu faro geliyo, islamarkaana uu aad wax uga qabto dhibaatada haysta shaqaalaha Gollaha Wakillada.
Waxa soo baxaya warar sheegaya in Gudoomiyaha cusubi uu xilka ka qaadaayo xoghaye C/risaaq Siciid Ayaanle, laguna bedelaayo Ibraahim Siyaad Yoonis oo hore u soo qabtay Maareeyaha Wakaalada Biyaha ee Hargaysa xiligii Madaxwayne Siilaanyo.
Previous article19 Sanno Ka Dib: Xaaladda KULMIYE, Jugtii u dambaysay ee Doorashadii Isku Sidkanayd Iyo Mustaqbalka Xisbigaas.
Next articleDiin ma leh qofka aan balan iyo amaano lahayni.